သရဲခြောက်တယ်လို့နာမည်ကြီးတဲ့ရဲတိုက်နား ဓာတ်ပုံတွေရိုက်မိတဲ့အခါ.....! - APANNPYAY
Home / ပရလောကအကြောင်း / သရဲခြောက်တယ်လို့နာမည်ကြီးတဲ့ရဲတိုက်နား ဓာတ်ပုံတွေရိုက်မိတဲ့အခါ.....!
Apann Pyay 4:31 AM ပရလောကအကြောင်း Edit
ပရလောကဆိုတာကို သင်ယုံပါသလား။ သရဲရှိတယ်ဆိုတာကို သင်ယုံပါသလား။ လက်တွေ့ခေါ်ယူသက်သေမပြနိုင်ပေမယ့်ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာတော့အံဖွယ်အဖြစ်အပျက်တွေရှိနေတာကို သင်လက်ခံရမှာပါ။
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊Aberdeenshire မှာရှိတဲ့ Crathes ရဲတိုက်ဟာ သရဲလိုလို၊ ၀ိညာဉ်လိုလိုအရာတွေ ခဏခဏမြင်တွေ့ရတယ်လို့ နာမည်ကြီးတဲ့ရဲတိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၇၈နှစ်အရွယ်ရှိ Bill Andrew ဟာ သူ့မိသားစုနဲ့ အတူ ထိုရဲတိုက်ကို သွားရောက်လည်ပတ်ပြီး ရဲတိုက်ရှေ့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ အဆိုပါပုံသဏ္ဍာန် ပါလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံရိုက်ချိန်ကဘာကိုမှ သတိမပြုမိဘဲ ဓာတ်ပုံတွေကိုပြန်စစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ အဆိုပါသဏ္ဍာန်ကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ မြေးဖြစ်သူတွေဝါ ရဲတိုက်မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ သရဲ ဒါမှမဟုတ် တခြားထူးဆန်းတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
Crathes ရဲတိုက်မှာ နာမည်ကြီးတာကတော့ မွေးကင်းစကလေးကိုချီထားတဲ့ပုံနဲ့ ပေါ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ ၀ိညာဉ်တစ်ကောင်လို့ဆိုပါတယ်။
ဓာတ်ပုံထဲမှာလဲကလေးကိုချီထားတဲ့ပုံနဲ့တူနေပြီး နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Lady Agnes လို့ခေါတဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ ၀ိညာဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
LadyAgnesကိုတော့သူမသေဆုံးသွားတဲ့ နှစ်ပတ်လည်မှာမှအဆိုပါရဲတိုက်မှာတွေ့မြင်ရတတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပရလောကဆိုတာကို သငျယုံပါသလား။ သရဲရှိတယျဆိုတာကို သငျယုံပါသလား။ လကျတှခေ့ျေါယူသကျသမေပွနိုငျပမေယျ့ကမ်ဘာအရပျရပျမှာတော့အံဖှယျအဖွဈအပကျြတှရှေိနတောကို သငျလကျခံရမှာပါ။
အင်ျဂလနျနိုငျငံ၊Aberdeenshire မှာရှိတဲ့ Crathes ရဲတိုကျဟာ သရဲလိုလို၊ ဝိညာဉျလိုလိုအရာတှေ ခဏခဏမွငျတှရေ့တယျလို့ နာမညျကွီးတဲ့ရဲတိုကျဖွဈပါတယျ။ အသကျ ၇၈နှဈအရှယျရှိ Bill Andrew ဟာ သူ့မိသားစုနဲ့ အတူ ထိုရဲတိုကျကို သှားရောကျလညျပတျပွီး ရဲတိုကျရှဓေ့ာတျပုံရိုကျတဲ့အခါ အဆိုပါပုံသဏ်ဍာနျ ပါလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဓာတျပုံရိုကျခြိနျကဘာကိုမှ သတိမပွုမိဘဲ ဓာတျပုံတှကေိုပွနျစဈတဲ့အခြိနျမှာတော့ အဆိုပါသဏ်ဍာနျကို တှရှေိ့ခဲ့ပွီး သူ့ရဲ့ မွေးဖွဈသူတှဝေါ ရဲတိုကျမှာနာမညျကွီးနတေဲ့ သရဲ ဒါမှမဟုတျ တခွားထူးဆနျးတဲ့ အရာတဈခုဖွဈမယျလို့ ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။
Crathes ရဲတိုကျမှာ နာမညျကွီးတာကတော့ မှေးကငျးစကလေးကိုခြီထားတဲ့ပုံနဲ့ ပျေါပျေါလာတတျတဲ့ ဝိညာဉျတဈကောငျလို့ဆိုပါတယျ။
ဓာတျပုံထဲမှာလဲကလေးကိုခြီထားတဲ့ပုံနဲ့တူနပွေီး နောကျတဈယောကျကတော့ Lady Agnes လို့ခေါတဲ့ အမြိုးသမီးရဲ့ ဝိညာဉျပဲဖွဈပါတယျ။
LadyAgnesကိုတော့သူမသဆေုံးသှားတဲ့ နှဈပတျလညျမှာမှအဆိုပါရဲတိုကျမှာတှမွေ့ငျရတတျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။